Epoxy nitazona harato tariby
1. Anaran'ny vokatra / solon'anarana:
Epoxy mifono tariby volovolo, epoxy coating harato, electrostatic coating harato, hydraulic filter protection mesh, hydraulic filter mesh, hydraulic filter metaly harato, filter support mesh, epoxy window efijery harato.
2. Fampidirana amin'ny antsipiriany ny vokatra:
Ny wiremesh mifono epoxy indostrialy dia ampiasaina indrindra ho an'ny sosona fanohanana ny sivana hydraulic / air ary ireo singa an'ny sivana. Ny harato epoxy sivily dia ampiasaina amin'ny efijery fanoherana ny halatra any amin'ny faritry ny trano avo. Ny famolavolana azy dia ny handraoka vovoka resin epoxy mesh manokana amin'ny tampon'ny harato tariby voatenona avy amina metaly samihafa amin'ny alàlan'ny famafazana elektrostatika. Aorian'ny maripana sy fotoana iray, dia miempo ny vovoka resin epoxy ary rakotra ambonin'ilay substrate mba hamoronana fonosana Protective matevina. Matetika ilay substrate dia manana harato vy tsy misy fangarony, harato alimika alimika, harato vy vy. Ny vovoka resin epoxy dia misy karazana anatiny na ivelany, izay azo namboarina sy novolavolaina arakaraka ny takian'ny mpanjifa (ao anatin'izany ny loko manokana).
3. Endri-javatra amin'ny vokatra:
Aorian'ny fitsaboana eto an-tany, raikitra ny teboka mifamatotra, ny harato dia mitovy sy toradroa, mitsivalana ny hena sy ny lalotra, tsy mora ny mamaha sy mihasimba ary mihamafy ny hery fanohanana; malefaka sy mora miorina ny harato; afaka mamorona loko isan-karazany izy io, boribory sy fanamiana ny loko.
Efatra. Tombony vokatra:
Ansheng dia manana laboratoara simulasi fampisehoana vokatra feno, ao anatin'izany ny fitsapana elastika hosodoko amin'ny loko, ny fitsapana ny hamafin'ny pensilihazo, ny fitsapana famafazana sira, ny fitsapana adhesion vovoka, ny fitsapana ny havizanana, ny fitsapana ny fanoherana ny solika, sns. Fitsapana kalitao fanodinana, ary fanandramana fampandrosoana ny vokatra vaovao, ny kalitaon'ny vokatra dia azo fehezina.
Mandritra izany fotoana izany, ny YKM dia manana lalam-pamokarana fitsaboana manerantany lehibe mitarika manerantany. Mampiasa famokarana maodely mahery infrared sy gazy voajanahary. Izy io dia manana ny mampiavaka ny famotsorana hafanana marin-toerana, ny fitoviana, ny fikirakirana mora, ny fiarovana ny tontolo iainana, sns., Ary ny fahafahan'ny famokarana dia mety hahatratra 50.000 m2 / Ny vokatra isan-taona dia manodidina ny 15 tapitrisa m2 isan'andro. Izy io dia manana toeram-pitsaboana entona mandrehitra izay mifanaraka amin'ny fenitry ny famoahana ao anatin'ny 10 taona ho avy, manohana ny fahaiza-manao aorian'ny fanodinana toy ny slitters, slicers, splicers, ary milina knitting net hafainganana haingam-pandeha 30.
1. Izy io dia mahatohitra ny fanitrihana solika sy ny harafesina. Izy io dia azo tsapaina amin'ny alàlan'ny marika isan-karazany amin'ny haino aman-jery solika hydraulic manerana an'izao tontolo izao amin'ny mari-pana sy ny fotoana samihafa, ary tsy misy fiovana ny velarana. Izy io dia mety amin'ny hafanana avo lenta sy ny vokatra fanivanana hidraulika manokana.
2. Fanoherana ny toetrandro, araka ny fenitra fitsapana famafazana sira ASTM B117-09, fitsapana mitohy ny velarana fanaronana 96H tsy misy fiovana, mety amin'ny sivana rivotra amin'ny tontolo masiaka sy tontolo iainana ivelany;
3. Adhesion mahery, afaka mandalo fitsapana pensilihazo kilasy H, fitsapana fiatraikany 1kg / 50cm, fitsapana an-tsokosoko, fitsapana fanoherana ny havizanana;
4. Fanoherana avo lenta, azo aforitra amin'ny vy vy miaraka amina tadin'ny 1mm tsy misy vaky,
5. Aorian'ny famonoana ny vokatra dia tsy hianjera ny sisin'ny tariby sisiny aorian'ny fisarahana ilay horonantsary, ary ny adhesion an'ny teboka mpampisaraka dia mety hahatratra 0,7kg.